Oxhumana naye – iSowa.io
Imisebenzi Yobuciko Nemibhalo
Unhlokweni Indawo Yewijethi Eseceleni Kwesokudla
Indawo Yewijethi Yebha eseceleni Eyisisekelo
Copyright © 2022 iSowa.io. Ubumfihlo Wonke Amalungelo Agodliwe.
Sisebenzisa amakhukhi kuwebhusayithi yethu ukuze sikunikeze ulwazi olufanele ngokukhumbula okuncamelayo nokuphinda ukuvakasha. Ngokuchofoza "Yamukela", uvumela ukusetshenziswa KWAWO WONKE amakhukhi.
Ungathengisi imininingwane yami siqu.
Izilungiselelo zekhukhiYamukelaYenqaba Konke
i-cookielawinfo-checkbox-analytics 11 izinyanga Le khukhi isethwe yi-plugin ye-GDPR Cookie Consent. Ikhukhi isetshenziselwa ukugcina imvume yomsebenzisi yamakhukhi esigabeni "Izibalo".
I-cookielawinfo-checkbox-iyasebenza 11 izinyanga Ikhukhi isethwe yimvume yekhukhi ye-GDPR ukurekhoda imvume yomsebenzisi yamakhukhi esigabeni "Iyasebenza".
i-cookielawinfo-checkbox-iyadingeka 11 izinyanga Le khukhi isethwe yi-plugin ye-GDPR Cookie Consent. Amakhukhi asetshenziselwa ukugcina imvume yomsebenzisi yamakhukhi esigabeni "Kudingeka".
cookielawinfo-checkbox-abanye 11 izinyanga Le khukhi isethwe yi-plugin ye-GDPR Cookie Consent. Ikhukhi isetshenziselwa ukugcina imvume yomsebenzisi yamakhukhi esigabeni "Okunye.
inqubomgomo_yekhukhi_bukiwe 11 izinyanga Ikhukhi isethwe i-plugin ye-GDPR ye-Cookie Consent futhi isetshenziselwa ukugcina ukuthi umsebenzisi ukuvumile noma cha ukusetshenziswa kwamakhukhi.. Ayigcini idatha yomuntu siqu.
Amakhukhi asebenzayo asiza ukwenza imisebenzi ethile njengokwabelana ngokuqukethwe kwewebhusayithi ezinkundleni zokuxhumana, qoqa izimpendulo, nezinye izici zenkampani yangaphandle.
Amakhukhi okusebenza asetshenziselwa ukuqonda nokuhlaziya izinkomba zokusebenza ezibalulekile zewebhusayithi esiza ekuletheni ulwazi lomsebenzisi olungcono kubavakashi..
Amakhukhi okuhlaziya asetshenziselwa ukuqonda ukuthi izivakashi zixhumana kanjani newebhusayithi. Lawa makhukhi asiza ukunikeza ulwazi kumamethrikhi inombolo yezivakashi, izinga lokugxuma, umthombo wethrafikhi, njll.
Amakhukhi okukhangisa asetshenziselwa ukunikeza izivakashi izikhangiso ezifanele nemikhankaso yokumaketha. Lawa makhukhi alandelela izivakashi kuwo wonke amawebhusayithi futhi aqoqe ulwazi ukuze anikeze izikhangiso ezenziwe ngokwezifiso.
Amanye amakhukhi angahlukaniswanga yilawo ahlaziywayo futhi angakahlukaniswa abe yisigaba okwamanje.